संसदीय समिति सभापतिमा हानथाप, को को हुन् बलियो दाबेदार? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
संसदीय समिति सभापतिमा हानथाप, को को हुन् बलियो दाबेदार?
प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेको दुई महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै संसदीय समितिमा सभापतिका लागि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकले संसदीय समितिः सभापतिमा हानथाप शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका चारका साथै संयुक्त दुई समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
मुठभेड नै शंकास्पद: ‘प्रहरीले नै गाडीमा हालेर लगेका थिए’
Trending Now : विस्तार हुँदै फोरजी, ४३ लाख प्रयोगकर्ता